Efa tena tsy vaovao amin’ny Jamaikana intsony izao ny Tsimokaretina Chikungunya hany ka antsoin-dry zareo hoe “Chik-V” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Febroary 2020 15:56 GMT
Vakio amin'ny teny Español, polski, Italiano, Français, English
Sarin'ilay moka Aedes aegypti.
Copyright Sanofi Pasteur – Mey 2011, nampiasaina teo ambany fahazoandàlana CC BY-NC-ND 2.0.
Raha mitombo manerana an'i Karaiba ny tranga mikasika ilay tsimokaretina Chikungunya virus, mbola manohy ny ezany koa i Jamaika amin'ny famerana ny fihanak'ilay aretina manrena ny nosy.
Ny moka Aedes Aegypti no manaparitaka ilay tsimokaretina, izay miteraka fanaviana sy fanaintainana mafy eny amin'ny vanintaolana. Hatreto, nangataka ny vahoaka ho mailo hatrany ny governemanta, hijery akaiky fa tsy mora hanatodizan'ny moka ny manodidina azy ary nampianatra azy ireo ny momba ireo fepetra fisorohana. Mikendry ny hanao fanambaràna hanokanana andro iray fanadiovana manerana ny firenana ihany koa izy, satria nanasarotra ny toedraharaha ny fanangonana tsy zarizary ny fako any amin'ny faritra sasany.
Noho ny fiheverana kosa anefa fa hitombo ireo tranga ireo, maro no nitsikera ny tsy fahampian'ny fanafody enti-miady amin'ireo soritraretina, ny fahelan'ny famaliana ny vonjitaitra sy ny fihetsika mikatokatona nasehon'ny minisitra manoloana ny valanaretina.
Tamin'ny voalohandohan'ity herinandro ity, nanakiana ny minisitry ny fahasalamana i Carolyn Joy Cooper tao amin'ny Jamaica Woman Tongue noho ny fanamaivanany ny isan'ireo tranganà Chikungunya, niantso izany rehetra izany ho “tsialalonteny”:
Tamin'ny Alatsinainy lasa teo, mbola nilaza hatrany ny Dr Fenton Ferguson fa '35 fotsiny’ ireo tranganà Chik-V voamarina manerana an'i Jamaika iray manontolo. Raha manana mpisafo fahadiovana io mpitsabo nify maha-te hidera io, azoko porofoina fa mifantoka aty amin'ireo arabe roan'ny manodidina ahy ny 25 % an'ireo tranga ireo !
Voan'ny chik-V aho. Voa ihany koa ireo mpiray vodirindrina avaty amin'ny havia sy havanako. Efatra izahay. Ary arý amin'ny arabe mifanila aminay, misy tranga dimy hafa fara-fahakeliny. Manome sivy amin'ny 35 izany. Ary mbola vao ireo fantatro fotsiny ireo. Mazava ho azy, ny ‘voamarina’ no miteny. Tsy tranga ‘voamarina’ izahay. Ahitàna ireo soritraretina izahay, saingy tsy misy dikany izany.
Ho an'ny Minisitry ny Fahasalamana, rehefa tsy nanao fitiliana rà ianao, dia tsatotsatoka fotsiny ihany ny anao sy ny mpitsabo anao.
Mba hialàna amin'ilay tsatotsatoka, nanapa-kevitra ny hanao fitiliana rà i Cooper, saingy nolazaina fa “lany ireo akora simika ilaina amin'izany”. Nanontany tena izy hoe fa maninona no mbola mihizingizina milaza ny minisitra fa “35 ihany ireo tranga voamarina” raha fitiliana rà maro dia maro toy izao no natao ho an'ny Chikungunya ka nahalany ny akora simika. Toa any anatin'ny sehatry ny fizahantanin'i Jamaika no ahitàna ny valiny :
Tsapako tanteraka ny fanahian'ny Dr Ferguson amin'ny fampitahorana ireo mpitsidika amin'ity Chik-V ity. Satria tokoa ny fizahantany no antom-pivelomantsika. Kanefa, heveriko fa manambany ny herimpon'ireo mpizahatany izy. […]
Tokony tsy hiraharaha be ny momba ireo mpizahantany ny minisitry ny fahasalamana fa hitodika manokana any amin'ireo vahoakan'i Jamaika.
Niombon-kevitra ny bilaogera Jean Lowrie-Chin, manamarika fa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ilay “fanambaràna tokana ho an'ny firenena’ entina mampahafantatra ny krizin'ny Chikungunya ankehitriny, izay efa saika mahakasika ny ankohonana rehetra ao Jamaika”, raha miresaka momba ny fanambaran'ny Dr Fenton Ferguson ho an'ny firenena tamin'ny fahitalavitra ny 28 Septambra. Efa niaiky izy taty aoriana fa nisy elanelana teo aminny isan'ireo tranga voamarina sy nahiana, saingy manamafy hatrany fa tanaty fomba matihanina no niatrehan'ny minisitry ny fahasalamana izany.
Nomen'i Lowrie-Chin an'ireo “Jamaikana tsy miraharaha ka manohy tsy manome haja ny tontolo iainany” kosa ny ankamaroan'ny tsiny, saigy nanome sosokevitra ihany koa ny amin'ny hanaovan'ny governemanta fandaharana asa fanomezan-kasa sahala amin'ilay nampidirina tao Kiobà, izay hanomezana fiofanana ireo olona hamantatra sy hanimba ireo toerana fanatodizan'ny moka ary hampianatra ireo vondrompiarahamonina tandindonin-doza. Nataony lisitra anatin'ny lahatsorany ireo fomba tsara kokoa mety nanaovana ny fifandraisana ofisialy momba ny valanaretina Chikungunya, milaza fa :
Ny mahatonga ireo dingana tsotra sy lôjika ho sarotra dia ny fanjakam-birao – io tanim-potaka izay toerana tsara indridra iafenan'ny tsy fahaizana sy ny tsy fandrosoana io. Raha toa ka tsy maintsy manaja ny governemantantsika voafidy tanatin'y demaokrasia isika, izy kosa dia tsy maintsy manaja ny vahoaka nianiany ho tompoina.
Nohazoniny ny teniny fa maro amin'ireo dingana diso natao tamin'ity “raharaha ChikV” ity no avy amin'ny “elanelam-pitantanana” sy ny kolontsain'ny fahantrana izay miteraka fandosiran'ny atidoha, mandroaka ny sasany amin'ireo loha tena mitondra fanovàna ho any amin'ireo firenena izay hanome lanja ny heviny.
Efa am-polotaonany izao no mihavery ny harena ara-olon'i Jamaika, toy ireo faritany hafa misedra ara-toekarena. Ny fikarohana nataon'ny Banky Iraisam-pirenena dia nahitàna fa “maherin'ny 360 %-n'ireo Jamaikana nahazo fanabeazana teny amin'ny ambaratonga ambony no mifindra monina, matetika any Etazonia, satria io no akaiky :
Ny taha avo dia avon'ny fifindramonin'ireo tsara fanabeazana indrindra avy ao Jamaika dia midika fa ny isan'ireo mpifindramonina nahazo fanabeazana tany amin'ny ambaratonga ambony avy ao amin'ity firenena ity dia mbola mihoatra ny isan'ireo mponina ao an-toerana manana io fari-pahaizana io.
Araka ny voalazan'ireo mpampiasa aterineto, raha fambara ny valintenin'ny governemanta Jamaikana manoloana ity krizy ara-pahasalamana ity, dia toy ny hoe tsy nisy na inona na inona, miaraka aminà paikady feno famoronana an-dalam-pikotrehana :
Ity ChikV mampihoron-koditra ity dia fanoharana amin'ny hirifiry sy ny fijaliana tsapan'ireo Jamaikana manetry tena, zara raha tafavoaka amin'ny fetran'ny fahantrana. Mendrika fanantenana kely ry zareo fa hanao izay afany ny governemanta hamerina ity firenena ity amin'ny toe-pahasalamana tomady.
Tonga saina ny bilaogera “Cucumber Juice” fa tsy dia mahavita zavatra manoloana ny Chikungunya ny minisitry ny fahasalamana ka namoaka fanontaniana sy valiny lalina kokoa momba ilay aretina, fomba fisorohana sy fomba hitsaboana ireo soritraretina raha toa ka voan'ny Chik-V ianao.